Ndeipi Inonyanya Kuwirirana SEO Mibvunzo Nemhinduro Unowana?
Kana iwe uchangotanga kupinda munyika ye SEO, zvinhu zvose zvinogona kuita sekuvhiringidza kwauri. Kunyange zvazvo pane mazana emashoko pamusoro pewebhu achipa mazano pamusoro pokuti ungatevedza sei kufamba kwepaiti yako, dzimwe dzadzo hadzina maturo, asi vamwe havanzwisisi zvakajeka zvekutsvaga kutsvakisisa zvakadini.
Semalt nyanzvi anonzwisisa kuti zvakaoma sei kune vanotangisa kuongorora nyika ye SEO kubva pakutanga. Ndosaka takasarudza kuti tisapinda zvakadzama mukati mehuniki hwezvinhu zvekutsvaga injini asi pane kunotsanangura chinangwa cheSeO chinonyanya uye unhu hukuru hwaro.
Pasi patinowana mibvunzo inowanzobvunzwa pamusoro peSEO. Magazini imwe neimwe inopindurwa nemhinduro yakajeka uye yakajeka. Verengai vose kuti vanzwisise zvinoreva kutsvakurudza injini.
6 Top SEO Mibvunzo nemhinduro
1. Zvinowanikwa sei SEO Cost?
Iri rinomirira zvakasimba pane nzira yako uye chinangwa chako. Kune vanhu ivavo vari kungotanga nehutano, zvinotora anenge maawa 10-20 pavhiki kuita zvakawanda zvebasa racho pachavo. Kana yakarongedzwa zvakanaka, mushandirapamwe pane chero bhajiro yemari inofanira kupedzisira ichidzoka kupfuura izvo zvakatanga kuiswa. Zvakare, zvose zvinoenderana niche yako uye chikonzero chaunotarisira.
2. Zvinotora Nguva Zvakadini?
Izvozvi zvinowanzosiyanawo zvakasiyana-siyana zvichibva pamusangano wemuiti wepaiti. Muchiitiko chacho iwe unongogadzira zvinyorwa zvitsva kamwechete pavhiki uye usabhadhara mari yakawandisa kana nguva yakakwana, zvinogona kutora kusvika gore usati watanga kuona mhinduro dzinooneka. Pane zvinopesana, nyaya dzakawanda yevhiki nevhiki, chivakwa chekugadzira zvisikwa, uye zvinokurudzirwa zvakasimudzirwa ndizvo izvo zvingakubatsira kuona zviitiko zvinokosha munyaya yemwedzi mishomanana. Kuti udimbure, nguva refu iwe uchitevera mushandirapamwe, mitezo iri nani yauchaona. Zviri nyore sezvazviri.
3. Ndinofanirwa Kuziva Kuchengetedza kweSeO?
Iri rinonyangadza. Mhinduro ndiyo hongu uye kwete. Chinhu chekutanga chekuyeuka: haufaniri kutora coding kuti utange ne SEO. Zvisinei, zvimwe zvekugadzira zvinhu zvinoda zvishoma zvewebsite backend ruzivo. Iye zvino, isu tiri kunyanya kutaura nezvemeta tsanangudzo nemabhobhoti. txt file. Nenzira yakanaka, nhasi zviri nyore zvikuru kupfuura makore mashomanana apfuura kuti uwane ne-programming zvidzidzo iwe pachako nekutevera nhanho-nhanho nhungamiro nemirairo paIndaneti.
4. Kana Google Isingabudisi Dhigiriro Yaro, Ndingaziva Sei Maitiro?
Zvose zvine chokuita nekuedza uye kukanganisa kana mune mamwe mazwi kuedza. Nhasi SEO inharaunda inoshanda zvikuru mukugovana zvikamu zvekuedzwa uye kuchinja kwechikwata. Vanhu vanonzwisisa kuti pamwe chete vanogona kutora mhedziso yakajeka pamusoro pezvinhu zvipi zvinokanganisa nzvimbo kubva ipapo, iyo yakanaka.
5. Nzira Yokusarudza Sei Zvakanaka Mashoko Ekutarisa?
Zvakakosha kuyeuka kuti muna 2017 kutsvakurudza mashandisirwo ekugadzirisa kuvimba zvakanyanya pamusoro pekuita semantic kupfuura zvavanoita pamapikicha emashoko mashoko emitsara imwechete pawebhu. Kunyange zvakadaro, zvinokwanisika kuti iwe unotora mazwi ezvakarurama emusoro wehurukuro yako yenyaya. Iwe unogona kuita nyore nyore izvozvo nekutsvaga mibvunzo yevashandi inowanikwa mubhizinesi rako rezvebhizimisi, nyaya dzinofambisa, uye dzimwe nzvimbo dzebhizimisi dzakakosha unoona vadzikwi vako vasina kuvhara.
6. Chii chinonzi "Keyword Stuffing"?
Keyword stuffing ndiyo nzira yekubatanidza mashoko akawanda kana mazwi mashoma pamapeji kana pawebhu. Kana iwe ukaisa shoko guru mumutsara mumwechete wezvinyorwa, uri kuisa. Kana iwe uchiverenga nyaya yacho zvinonzwika uye mamwe mabhesi anowanikwa mundima yacho kakawanda, iwe uri kuisa. Mhinduro yacho iri pachena - musaiti zvinhu. Zvakashata nokuda kwe SEO yako uye unoshandiswa nemushandisi.
Tinovimba kuti unowana "SEO mibvunzo nemhinduro" runyoro runobatsira Source . Ita kufara kuongorora zvinokosha zve SEO!